မှန်ကန်စွာ ရွေးချယ်ခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မှန်ကန်စွာ ရွေးချယ်ခြင်း
Posted by manawphyulay on Sep 29, 2011 in Creative Writing, Drama, Essays.. |9comments
မနောအတွေး မနောအမြင် သည်ခရီးကို သည်ထီးနှင့် သည်လမ်းကို သည်ပန်းနှင့်
လူတွေဟာ အဖေနဲ့ အမေ ကို ရွေးခြယ်လို့ မရဘူးတဲ့။
တစ်ကယ်တမ်း သေသေခြာခြာ စဉ်းစားကြည့်တော့
ကျွန်တော်တို့မှာ ရွေးခြယ်ခွင့် များများစားစား မရှိပါ။
ကိုယ်ဘာလိုချင်လည်း ဆိုတာ သေသေချာချာ သိရင်တောင် ရွေးခြယ်ခွင့်ရှိပါရဲ့လား။
လူတစ်ယောက် ဘ၀တစ်မျိုး ဖြစ်တဲ့အတွက် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုမှု ကလည်း
အမျိုးမျိုးဖြစ်နေမှာပါ။ ဘ၀ဆိုတာ ခပ်ညံ့ညံ့ စားဖိုမှူးတစ်ယောက်ချက်တဲ့ ဟင်းလိုပဲ
ရွေးချယ်လို့မရတဲ့အရာကိုတော့ မရွေးချယ်နဲ့ပေါ့ရှင်။ ရွေးချယ်ခွင့်ရတဲ့အရာတွေကိုတော့ သေသေချာချာ ပိုပြီး ရွေးချယ်တော့ ကောင်းတာပေါ့နော်။
မိဘကို ရွေးချယ်လို့ မရဘူး.. ဟုတ်ပီ
ယောက္ခမ ကိုတော့ ရွေးချယ်လို့ရတယ်…
ချမ်းသာတဲ့ ယောက္ခမ ပဲ ရွေးမယ် ဒါဗျဲ…..
သားမက်တော်ချင်သူရှိပါက ပီအမ် ပို့ကြပါကုန်
အဲဒါတော့ တာမီးလည်း တိဝူးနော်…. တာမီးကျောတာ အဲဒါပါဝူးလေ…:P
“တိုတောင်းလှသော ရရှိလာသည့် ဘဝအတွင်း စိတ်ချမ်းသာမှုသည် ဘယ်အရာများနဲ့မှ ကျွန်မအတွက် မလဲလှယ်နိုင်ချေ။ ”
အဲဒီစာသားလေး ကို ကျွန်တော်လဲ လက်ကိုင်ထားတယ်… ဟုတ်တယ် အစ်မပြောသလိုပဲ ကိုယ်လုပ်ချင်တာလုပ် ကိုယ်ဖြစ်ကိုယ်ခံ ဘယ်သူမှ မကောင်းမကြံနဲ. လုပ်ချင်တာ လုပ်သူများမထိခိုက်မနစ်နာစေနဲ.လေနော့….
ဘ၀မှာ ကိုယ်သာလျှင်ကံ ကိုယ်သာလျှင် အားကိုးရာပါဗျာ….
မမနောလဲ ကိုယ်ခံယူချက်ကို ဆုပ်ကိုင်ရင် အောင်မြင်တဲ့ဘ၀လမ်းကို အဆုံးထိလျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေ…
ဘယ်အလုပ်ပဲဆိုဆို မှန်မှန်မဆုံးဖြတ်နိုင်မှာအရမ်းကြောက်တယ် အဆုံးအဖြတ်မှားရင်တဘ၀လုံးပြင်လိုမရတဲအမှားတွေဖြစ်သွားမှာဆိုးလို
(ကံ၊ ဉာဏ်၊ ဝိရိယ ဆိုတဲ့စကားအတိုင်း ကံကိုပဲယုံပြီး ဘာမှမလုပ်ရင်လည်း ဖြစ်လာမှာမဟုတ်သလို ဉာဏ်ကိုပဲ အားကိုးလို့လည်း မရနိုင်ပါဘူး။ အောင်မြင်မှုကိုလိုချင်ရင် ဒီသုံးချက်နဲ့လည်း ကိုက်ညီအောင် ကျင့်ကြံနေထိုင်သွားဖို့လည်း လိုအပ်လှပါသည်။ ရွေးချယ်မှု မှန်ကန်ပြီး
ကြိုးစားအားထုတ်မှုလည်းရှိပါမှ အောင်မြင်မှုဟူသည် မိမိ၏ လက်အတွင်းဝယ် ဆုပ်ကိုင်မိမည်မှာ အသေအချာပင် ဖြစ်ပါတော့သည်။)TRUTH
ပို့စ်လေးအတွက် ကျေးဇူးပါပဲ မနောလေးရေ…
လွတ်လပ်စွာ ဆုံးဖြတ်တတ်မှု လိုအပ်ပါတယ်….
မိမိအနှောင်အဖွဲ့ များအပေါ် အဟုတ်ထင် ငြိတွယ်မှု ကင်းဖို့လိုပါတယ်…..
အဟုတ်ထင်ငြိတွယ်မှု ကင်းဖို့အတွက်….မှန်ကန်တဲ့ နားလည်မှုလိုအပ်ပါတယ်။
မှန်ကန်တဲ့ နားလည်မှုအတွက်….တော့ ……..??????
ဘ၀မှာ မှန်ကန်အောင် မရွေးချယ်သူဟာကျွှန်တော်ပါပဲ
တော်လိုက်တာ…. ဒီကောင်စိတ်ချမ်းသာမူကို ဆုတခုလို မက်မောခဲ့ရသည်
မရခဲ့ ခုထိမရခဲ့ ထက်ပြီးဝေးခဲ့ရသည်။လမ်းကြောင်းမှန်ကို ရွေးခဲ့ပါသည်
ညံ့လွန်းလို့ ကိုယ်မှန်တယ် ထင်တဲ့ လမ်းက အခြားလူအတွက် အမှားဖြစ်နေသည်
ကိုယ်ဟာ လမ်းရွေးမှားတဲ့ ရထားပါ ။သုံးသပ်မူလွဲချော်တဲ့ လူပါ
ဆရာမကြီးဒေါ်မနောဖြူခင်ဗျား ဆောင်းပါးကောင်းလေးအတွက်ကျေးဇူးပါ။ကိုယ်နှင့် အသင့်
တော်ဆုံး အလိုက်ဖက်ဆုံးလမ်းကို ကျွန်တော် ရွေးပါတော့မယ်ခင်ဗျား။